धादिङको गँगाजमुना माई देशकै ऐतिहासिक पर्यटकिय क्षेत्र हो: भक्त बहादुर लामिछाने - Dhading Sanchar
धादिङ, २० कात्तिक ।
नेपालकै प्रख्यात धार्मिक स्थल गंगाजमुना माई मेलाको सम्पूर्ण तयारी सकिएको वडाध्यक्ष तथा गंगाजमुना माई मेलाको मुल आयोजक समितिका संयोजक भक्त बहादुर लामिछानेले बताउनुभयो । गंगाजमुना माईको दर्शन गरे पश्चात् आफ्नो मनोकांक्षाहरु सबै पुरा हुने विश्वासले धेरै भक्तजनहरु मेलाामा आउने गरेको लामिछानेले बताउनु भयो। त्यस्तैगरि त्यहाँको पानीले नुहाउदा कुकुर लगाएत अन्य जिवहरुले टोकेको भए कुनै पनि रोग नलाग्ने भन्ने विश्वास रहि आएको छ र त्यहाँ भेटि चडाउदा गंगाजमुना माईले मनको ईच्छाहरु पुरा गर्छ भन्ने किम्बद्धन्ती रहि आएको लामिछानेले बताउनु भयो। उनै वडाध्यक्ष तथा गंगाजमुना माई मेलाको मुल आयोजक समितिका संयोजक भक्त बहादुर लामिछानेसँग सहकर्मी रामकुमार थापाले समग्र गंगाजमुना माई मेलाको बिषयमा गर्नुभएको कराकानीको संपादित अंश :
१.मुल आयोजक समितिको संयोजक भएर हिड्नु भएको छ, कत्तिको धपडी हुदो रहेछ ?
व्यस्त त धेरै नै छु । तर मलाई के लाग्छ भने म वडाध्यक्ष र गंगाजमुना माई मेलाको मुल आयोजक समितिको संयोजक भएपछि पनि मलाई जति दुख पर्छ त्यसमा नै रमाउने गर्छु । मैले आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरुलाई प्रवाह नगरि गंगाजमुना मेलालाई भव्य रुपमा सम्पन्न गर्ने तयारीमा लागि रहेका छु । हाम्रो तयारी तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यो एउटा राष्ट्रिय रुपकै धार्मिक स्थल हो तर त्यसलाई हामीेले त्यसको त्यत्ति धेरै परिचय गराउन सकेका छैनौ । हाम्रो गाउँपालिकाले नयाँ योजनाका साथ गंगाजमुना मेलालाई व्यवस्थित गर्ने र त्यसलाई पर्यटकिय स्थलको रुपमा विकास गर्दै गंगाजमुना गाउँपालिका वासिहरुको आर्थिक स्तर बढाउने लक्ष्य रहेको छ । नेपाल अधिराज्य भरि लाग्ने एउटा मेला मध्ये गंगाजमुना मेला एक हो । त्यहाँ ६०÷७० हजार भन्दा बढि जनसमुदायहरु उपस्थित हुनुहुन्छ । त्यसको छुट्टै महत्व रहेको छ । आफ्नो मनोकांक्षाहरु पुरा गर्ने उद्धेश्यले धेरै मानिसहरु आउने गर्दछन् । त्यस्तै गरि त्यहाँ एउटा कुकुर धारो रहेको छ त्यहाँ नुहाई सकेपछि कुनै पनि जिवजन्तुले टोकेको छ भने सबै रोगहरु मुक्त हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ । धेरै टाढा–टाढा बाट भक्तजनहरु आउने गर्नुहुन्छ ।
कहिल्यै पनि त्यहाँ नजाने मानिसहरुले त्यो कुरा कल्पना नै गर्न सक्नुहुन्न । त्यसकारणले यो ऐतिहासिक राष्ट्रिय महत्वको कुरा हो । अबको दिनमा गंगाजमुना मेलालाई राष्ट्रिय मेलाको रुपमा प्रस्तुत गरेर पूर्वाधारको हिसाबले पनि त्यसलाई सशक्त रुपमा विकास गदै त्यसलाई मजबुत मनाउने हिसाबले लागिरहेका छौँ । एउटा नयाँ भिजन लिएर हामीले तयारी गरिरहेका छौँ ।
२.यसमा नाम राख्नको लागि कत्तिको सजिलो भयो ? गंगाजमुना नाम नै राख्नुको उद्धेश्य के हो ?
संघियता पछि गाउँपालिकाको नामाकरण गर्ने क्रममा धेरै मानिसहरुले नामहरु प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यो गंगाजमुना गाउँपालिका भित्र रहेको एउटा ऐतिहासिक महत्वको धार्मिक स्थल गंगाजमुनामाई धेरै विश्वास गर्ने गर्छन गाउँपालिका भित्रका जनसमुदायहरुले । एउटा सर्वसाधारण नागरिक देखि लिएर ठुला–ठुला विद्धवानहरुलाई पनि त्यो कुराको अनुभव रहेको छ । त्यस कारणले गंगाजमुना गाउँपालिकालाई के नाम राख्ने भन्ने कुरा आउदा हाम्रो पर्यटकीय मन्दिर गंगाजमुना माईको मन्दिर छ त्यसलाई नै राख्दा उपयुक्त हुन्छ र विवादरहित हुन्छ भन्ने किसिमले त्यो नाम रहन गयो । त्यो धेरै सान्दर्भिक रहेको छ । गंगाजमुना गाउँपालिकालाई विकास गर्ने सन्दर्भमा त्यही नाम युक्त रहेको छ ।
३. गंगाजमुना माईको मेला लाग्दैछ भन्ने थाहा पाएपछि सबैको झुकाव धेरै रहेको पाईएको छ त्यस बाट के थाहा भयो भने त्यो धेरै महत्वपुर्ण रहेछ नि ?
निश्चय रुपमा त्यो महत्वपुर्ण रहेको छ । त्यो गंगाजमुना माई मेला त्यहाँ दर्शन नचाहाने भक्तजनहरु त्यो किसिमको विश्वास नै भने त्यो धादिङ जिल्लाको दुर्गम वस्तिमा रहेको ठाउँ हो । बल्ल अहिले मात्रै गाडी जाने व्यवस्था मिलाएका छौँ । यत्ति धेरै विश्वास थिएन भने किन त्यत्ति धेरै मानिसहरु मेलामा आउछन् त त्यो एउटा विश्वासले नै त हो नि । अहिले धादिङको बढिगण्डकी हाईड्रोपावर बन्दै छ त्यसको अन्तिम बिन्दु भनेको यही गंगाजमुना गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ बसेरीको वोडारेको फेदि भन्ने ठाउँ पर्छ । पर्यटनको एउटा रुट पनि तयार गर्दै छाँै । समग्र रुपमा हाम्रो पर्यटनको रुट छ त्यो गंगाजमुना गाउँपालिका नै हो । त्यो रुटले के महत्व राख्छ भने गंगाजमुना गाउँपालिकालाई सवर गर्छ त्यो रुटले सबै गाउँपालिका भरिका सबैले त्यसको फाईदा लिन पाउछन् । त्यो एउटा रााष्ट्रिय महत्वको कुरा हो । त्यसकारणले यो धादिङले मात्रै गर्ने, गंगाजमुना गाउँपालिकाले मात्रै गर्ने भन्ने कुरा होईन । त्यसको अझै प्रचार–प्रसार गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले हामीले मेलामा पर्यटन मन्त्रि ल्याउने भन्ने कुरा गरेका थियौँ समय नमिलेर ल्याउन सकिएन । हाम्रो प्रमुख अतिथीको रुपमा धादिङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का संघिय सांसद खेम प्रसाद लोहनीलाई आमन्त्रण गरेका छौ । त्यस्तै गरि प्रदेश सांसद जगत सिंखडा,पूर्व संविधान सभा सदस्य गुरु प्रसाद वुर्लाकोटी लगाएत धेरै अतिथीहरुलाई आमन्त्रण गरेका छौँ ।
उहाँहरु मार्फत पनि हामीले के गछा भने यसलाई प्रचार–प्रसारको अभियान बनाएर राष्ट्रिय महत्वको पर्व र राष्ट्रिय रुपको पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ । निश्चय रुपमा नै केहि वर्ष पछि हामीले पूर्वाधारको सन्दर्भमा पनि अगाडी बढाउने छौ । प्रचार–प्रसारको हिसावले पनि यो एउटा राष्ट्रिय रुपको पर्यटकीय क्षेत्र हो भन्ने कुरा हामीले प्रमाणित गर्ने छौँ यही कुरा सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।
४.गंगाजमुना जुन हाम्रो धार्मिक स्थल छ त्यसमा पर्यटकहरु आँउदा सिङगो धादिङ जिल्लामा मात्रै नभई नेपाललाई मात्रै फाईदा हुन्छ यसको बारेमा के सोच्नु भएको छ ?
धादिङ जिल्लाको गंगाजमुना गाउँपालिकामा धेरै पर्यटन व्यवसायि हुनु्हुन्छ । जो काठमाण्डौको ठमेल चोकमा पर्यटनमा आवद्ध भएका साथीहरु धेरै प्रतिशत धादिङको नै हुनुहुन्छ । त्यसमा पनि गंगाजमुना गाउँपालिका भित्रका पनि धेरै छन् । यो बेलामा हामी गंगाजमुना गाउँपालिकाले आयोजना गरेको हिसावले काठमाण्डौमा रहेको गंगाजमुना गाउँपालिका भरिका सबै पर्यटन व्यवसायिहरुलाई आमन्त्रणा गरेका छाँै ।
निश्चय रुपमा उहाँले सबै पर्यटकीय क्षेत्रहरु देखाएर पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा अगाडी बढ्ने हाम्रो योजना रहेको छ । त्यसैले पनि हामीले धेरै पर्यटन व्यवसायिहरुलाई बोलाएका छौ ।
५. हाम्रो नजिर्कै रहेको यस्तो पर्यटकीय क्षेत्र हुदा पनि यसको अझै प्रचार प्रसार नहुदा पर्यटकीय व्यवसायिहरु सँग मिलेर अगाडी बढ्नुपर्नेहो तर त्यो भएको छैन नि होईन र ?
गंगाजमुना गाउँपालिका र सिङगो बाट पर्यटन व्यवसायमा आवद्ध भएका साथीहरु सँग मेरो व्यक्तिगत रुपमा आफै सम्बन्ध रहेको छ उहाँहरु सँग कुराकानी भईरहन्छ । उहाँहरुले भन्नुहुन्छ पटक–पटक हामीलाई भनि राख्नु भएको छ , गाउँपालिकाको एउटा टिम लिएर काठमाण्डौ आउनुस् । गंगाजमुना गाउँपालिकालाई कसरी पर्यटकीय रुपमा विकास गर्ने एउटा भिजन लिएर आउने छाँै भन्नुहुन्छ । तर के छ भने हिजोको दिनमा पर्यटन व्यवसाय बाट आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको चेतना नभएको कारणले गर्दा पनि त्यस्तो समस्या भएको थियो ।
अब हामीले शसक्त रुपमा त्यो काम गर्ने छौ । त्यहाँका धेरै साथीहरु पर्यटन व्यवसायहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरु सहयोग गर्ने पक्षमा पनि हुनुहुन्छ । अब हामी त्यसको अभियानमा लाग्छौ ।
६.अहिले स्थानीय तह आएपछि नयाँ–नयाँ तरिकाले मेला संचालन भईरहेको छ नि के तपाईहरुको प्रत्येक वर्षमा नयाँ–नयाँ बनाउने भन्ने योजना छ ?
निश्चय रुपमा त्यो योजना छ नै । लगभग आज भन्दा १० वर्ष अगाडी गंगाजमुना माईको मेला तिहार पछिको दशमी र एकादशीको दिन भव्य रुपले लाग्छ । त्यहाँ धेरै मानिसहरु आउने गर्नुहुन्थ्यो धेरै झै–झगडा पनि हुने गथ्र्यो । त्यसपछि त्यसलाई परिमार्जन गदै अगाडी जाने कुरा भयो । त्यसपछि हाम्रो तत्कालिन धादिङको क्षेत्र नम्बर १ का माननिय सांसद धन बहादुर घलेले त्यसको बारेमा ठुलो पहल गर्नुभयो । विस्तारै गंगाजमुना संरक्षण समिति भनेर बनाएका थियौँ । त्यसको संयोजक नारायण बहादुर कार्कीले त्यो कार्यक्रम मनाउनु भएको थियो । अहिले सबै गाउँपालिका वासीहरु यो हाम्रै हो हामीले नै संरक्षण गरेर पर्यटन ल्याउनुपर्छ भन्ने विचारमा अगाडी बढेका छौँ । गंगाजमुना माईलाई एउटा राष्ट्रिय महत्वको मेलाको रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ त्यसलाई एउटा राष्ट्रिय रुपमा नै विकास गर्नुपर्छ त्यसबाट धेरै आर्थिक उत्पादन गरेर जनतालाई आर्थिक समृद्धिको कुरा सिकाउनुपर्छ । त्यहाँ एउटा पर्यटकको ठुलो गन्तव्य स्थान बन्ने छ , होमस्टेहरु बनाउने र्छौ, पैदल मार्ग पनि बनाउने छौँ, साथै वनजंङगलको संरक्षण गरेर त्यहाँ जडिबुटी उत्पादन गरेर स्थानीयवासिहरुको जिवन स्तरहरु परिवर्तन गराउने योजना रहेको छ । त्यही अनुसार हाम्ी अगाडी बढिरहेका छौ ।
७. गंगाजमुनाको प्रचार–प्रसार त धेरै सुनियो तर त्यहाँ के कस्तो छ त्यो बताईदिनुस् न ?
यो धादिङबेशी बाट बसमा जाँदा साढे पाँच घण्टा लाग्छ । त्यो कस्तो छ भने माथि एउटा ठुलो पहरो छ त्यो पहरो बाट दुई वटा झरनाहरु झरिरहेको छ । त्यो भन्दा मुनि एउटा गंगा र जमुनाको मुर्ति छ वास्तवमा त्यहाँ एउटा सानो प्वाल छ । श्रदालुहरु त्यहाँ गएर भेटि चडाउनु हुन्छ । त्यहाँ चडाएको भेटि धेरै तल पुगेको आवाज आउछ । त्यो पहरोमा त्यस्तो भएको कारणले त्यहाँ राम्रो बाटो लगाएर दायाँ र बाँया रेलिङ लगाएर मन्दिर सम्म पुर्याएका छौँ । त्यसको देर्वे पट्टि कुकुर धारो छ त्यहाँ माथि बाट पानी झरिरहेको छ । त्यो धारो पानीले नुहाउदा कुकुर लगाएत अन्य जिवहरुले टोकेको भए कुनै पनि रोग नलाग्ने भन्ने विश्वास छ । भेटि चडाउदा गंगाजमुना माईले सबै मनको ईच्छाहरु पुरा गर्छ भन्ने किम्बद्धन्ती रहेको छ ।
यो सालमा हामीले १ करोडको पूर्वाधारका कामहरु गरेका छौँ । हामीले उता डाँडाखर्क बाट आउने एउटा छुट्टै गेट बनाएका छाँै । माथि रहेको मेन गेट छुट्टै बनाएका छौँ । यता खोरिया पटि बाट आउने छुटटै गेट बनाएका छौ । त्यसपछि हामीले खोरिया बाट जानको ठाउँमा पनि गेट बनाएका छौ । दुवै ठाउँमा हामी धारा, ट्वाईलेट बाथरुम बनाईसकेका छौ । मानिसहरु बस्ने होमस्टे जस्ता दुई तीन वटा ट्रस्टहरु बनाईसकेका छौ ।
तर हिजो मात्रै हामीले एक लाख छ हजारको लागतमा एउटा कुकुरको मुर्ति बनाइएर राखि सकेका छौ । भोली बाट त्यहाँ प्राविधिक साथीहरु र अन्य काम गर्ने साथीहरुले जडान गर्दै हुनुहुन्छ । २१ गते तपाईहरु आँउदा त्यहाँ कुकुरको मुख बाट पानी बगिरहेको हुन्छ । त्यसै गरि हाामीले गंगा र जमुनाको मुर्ति पनि बनाउन दिईसकेका छौँ । त्यो अर्को वर्षमा मात्रै तयार हुने छ । हामीले मुर्ति राख्ने ठाउँ बनाइसकेका छौँ । तल पनि हामीले मञ्चको लागि तयारी गराउदै छौँ ।
काठमाण्डौको पशुपति मन्दिर जस्तो सुविधा सम्पन्न मन्दिर भए गंगा जमुनाको मन्दिर हुने हो भने झन धेरै भक्तजनहरु आउन सक्छन् । काठमाण्डौमा रहेको टुडिखेल भन्दा पनि ठुलो चउर रहेको छ तर केहि वारिहरु रहेको छ । त्यहाँ पसलहरुको स्टल राख्ने कामहरु भईसकेको छ । म यही रेडियो बाटै अनुरोध गर्दछु कि सबै जना एक पटक आएर त्यहाँको अवलोकन गर्नुस् ।
८.गंगाजमुना नेपालकै नमुना मन्दिर भईसकेपछि एकपटक नपुगी नहुने ठाउँ हो ?
यसलाई हामीले राजनितिक रुपमा, शैक्षिक रुपमा एउटा चेतनाको र विकासको हिसाबले हामी पछाडी पर्यौ र भौगोलिक हिसाबले पनि हामीलाई साथ दिएन र प्रचार—प्रसारको हिसाबले पनि पछाडि पर्यौँ । अब हामी यो अवस्थालाई कायमै रहन दिदैनौँ । हामीले यो मन्दिको प्रचार–प्रसारका कार्यालाई अगाडी बढाएका छौँ । नेपाल भरिका सम्पूर्ण धार्मिक व्यक्तित्व र राजनितिक व्यक्तित्वलाई एक पटक जसरी भएपनि यस मन्दिको दर्शन गर्न आउनुस् भन्छु । कीनकी यो मन्दिरको आफ्नै छुट्टै महत्व रहेको छ,छुट्टै विषेशता रहेको छ । यो मन्दिरमा जति–जति मान्छेका भिड बढ्दै गयो त्यति त्यति नै यो मन्दिरको. झरनाको बहाब आफै बढ्दै जान्छ । यो मन्दिरको एउटा आश्चर्य जनक अलौकीक शक्ति रहेको छ । यो कुराको बाहिरबाट कसैले पनि विश्वास गर्नै सक्दैन । जब त्यहा गईन्छ जाँदा बेलुकीको समयमा त्यहाँको झरना सानो हुन्छ । जब रात बित्दै जान्छ तब यस झरनाको बहाब पनि बढदै जान्छ । यो मन्दिरमा गएर यस मन्दिरको बारेमा वास्तविकता बुझी सकेपछि उँहाहरु आफैले विश्वास गर्न थाल्नुहुन्छ । यसको वास्तविकता यस्तो रहेको छ । त्यसकारण यो मन्दिरमा एक पटक जसरी भएपनि आउन सम्पूर्णलाई आग्रह गर्छु ।
९.यो मन्दिरमा पुजा गर्दा के को मूर्ति गंगाजमुनाको मात्र छ की महादेवहरुको पनि मूर्ती रहेको छ । यो मन्दिरमा पूजा गर्न जाँदा हामीले पुजाको सामग्रीहरुमा के–के लैजानुपर्छ ?
यो मन्दिरमा पूजा गर्दा अहिले सम्म अरु–अरु मन्दिरहरुमा जस्तो बोकाहरुको बलि चढाउने गरिएको छैन । त्यहा विशेष त धर्मका हिसाबले जाने मान्छेहरुले त्यहाँ सबैले जोडी परेवा उँडाउने गरिन्छ । परेवालाई हामीले शान्तिको प्रतिकको रुपमा लिने गरिन्छ । यो कार्यले हामीलाई शान्ति मिल्छ भन्ने विश्वास रहेको छ । निश्चय नै त्यो कार्यले आत्मा सन्तुष्टि मिल्छ, मानोकांक्षा पुरा हुन्छ भन्ने विश्वास रहेको छ । यो मन्दिरलाई हामीले गंगाजमुना गाउँपालिकामा मात्र नभएर,धादिङ जिल्लामा मात्र नभएर राष्ट्रिय रुपमा नै हामी यो मन्दिरको प्रचार–प्रसार गर्ने छौँ । त्यो कार्यको हामीले थालनी गरी सकेका छौँ ।
१०.कोही मान्छे अब २१ गते यो मन्दिरमा मेला लाग्दैछ आउन चाहेमा उनीहरुलाई धादिङबेसीबाट के–कस्तो सुबिधा रहेको छ ?
यसको लागी हामीले काठमाण्डौँको माछापोखरीमा धादिङ यातायातको बसपार्क टिकट काउन्टरमा पनि हामीले समन्वय गरीसकेका छौँ । सिधै हामीले १९ गते,२० गते र २१ गतेको दिन माछा पोखरीबाट गंगाजमुनासम्म जानको लागी हामीले बस व्यवसायी साथीहरुलाई भनी सकेका छौँ । धादिङबेसीबाट पनि हामीले धेरै बस व्यवसायी साथीहरुलाई भनीसकेका छौँ । स्ट्यान्डबाई बस राख्नुस धेरै मान्छेहरु आउँछन् । त्यसमा तपाईँहरुलाई कुनै समस्या पर्छ भने हामीसँग भएका सामाग्रीहरु प्रयोग गरेर हामी त्यो समस्याहरुलाई समाधान गर्ने छौँ भनी सकेका छौँ । त्यतिमात्र नभएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र शसस्त्र प्रहरी बलको कार्यालयमा गएर उहाँहरुसँग पनि मैले सुरक्षा कर्मीको माग गरे । २१ गते बिहानै हामीले बसको व्यवस्था यरेका छौँ र सुरक्षाकर्मीहरु पनि ३० जना शसस्त्रका साथीहरु र २० जना जनपथका सुरक्षाका साथीहरु बिहान ५ बजे यहाँबाट हिड्नुहुनेछ । विहान ११ बजे उँहारु त्यँहा पुग्नुहुन्छ र त्यहि बस सँगै अरु बसहरु पनि जान्छन् । यदि जो कोही व्यक्तिलाई जाने इच्छा भयो भने साधनको कमीहुने छैन ।
११.सामान्य मेलामा त झगडा पर्ने गर्छ यो मेलामा भक्तजनहरुलाई आफू सुरक्षित छु भन्ने महसुस गराउनको लागी के व्यवस्था गर्नुभएको छ ?
सुरक्षाको सन्दर्भमा हामीले हाम्रो भक्तजनहरुलाई अत्यन्त शसक्त ढङ्गबाट सुरक्षित राख्नको लागी हामीले व्यवस्था मिलाएका छौँ । गंगाजमुना मेरा परिसर वरिपरि कसैलाई पनि सिसि जन्य पेयपदार्थ लिएर आउनको लागी हामीले छुट दिएका छैनौँ । अर्को कुरा भनेको हामीले कसैलाई पनि त्यहाँ हात हतियार लिएर आउनकोे लागी छुट छैन । यदि कसैले त्यस्ता हात हतियारहरु लिएर आउँछन् भने हाम्रो स्वायमसेवक साथीहरुले प्रहरीको जिम्मा लगाईदिने छ र उनीहरुलाई तुरुन्त जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङमा ल्याएर कारबाहि गरिनेछ । हामीले सुरक्षाकर्मीहरुको साथ साथै ६० जना हाम्रा स्वयमसेवकहरु त्यार परिसकेका छौँ । स्वयमसेवक साथीहरुलाई हामीले उहाँहरुले गर्नुपर्ने काम र अनुसासनका बारेमा सबै प्रशिक्षण गरी सकेका छौँ । त्यसकारण जतिपनि मान्छे त्यहाँ आउनेछन् उहाँहरुलाई सुरक्षामा कुनै समस्या हुने छैन । सुरक्षा कर्मी सँगै त्यहाँ हामीले भेटी बक्स पनि राख्ने छौँ त्यसकारण माथी देखी तल्लो श्रेणीसम्म सुरक्षाको हिसाबले कुनै पनि समस्या हुने छैन । यदि कुनै मान्छे त्यहाँ आएर बिरामी भयो भने पनि हामीले तुरुनत उँहाहरुलाई कहाँ लैजाँदा ठिक हुन्छ त्यसको पनि हामीले व्यवस्था मिलाएका छौँ ।
१२.सरकारले पनि २०२० लाई पर्यटन वर्षको रुपमा घोषणा गरी रहँदा यसलाई पनि जोड्न कत्तिको सकिन्छ ?
नेपाल सरकारको पर्यटन वर्ष २०२० लाई सहयोग पुर्याउने हिसाबले नै हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ । केन्द्रिय सरकारको लक्षलाई हाम्रो स्थानीय क्षेत्रले साथ दिने लक्षका साथ गंगाजमुना गाउँपालिकाले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । यसै सबै जिम्मा अहिले गाउँपालिकाले लिएको छ र यसको विकास प्रचार—प्रसारको लागी गाउँपालिकाले लगानी गर्नेछ ।
१३.यो कार्यक्रम सँग–सँगै राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरु मनमाया वाईवा देखी अन्य कलाकारहरु आउनेछन् साँस्कृतिक कार्यक्रमको पनि आयोजना गरिएको छ, के कार्यक्रम रातैभरी हुन्छ ?
गंगाजमुनाको मनोरञ्जनको अर्को पार्टो भनेको यो हो । यसमा हामीले धेरै कलाकारहरु ल्याउने व्यवस्था गरेका छौँ । दिनको ११ बजेबाट उद्घानका कार्यक्रम सुरु हुन्छ र हामीले भाषणको कार्यक्रम तीन घण्टाको मात्र राख्ने छौँ । यसको बीच–बीचमा पनि हामीले साँस्कृतिक मनोरञ्जनहरु राख्ने छौँ । भाषणको कार्यक्रम सकीसकेपछि हामीले २२ गते बिहान १० सम्म त्यो मंञ्च नै हामीले कलाकारहरुको जिम्मामा छोड्दिने छौँ र हामी भने तपाईहरुसँगै नाच्ने छौँ । त्यँहाको जनघनत्व भोलीपल्ट २२ गते बिहान १० बजेसम्म त्यतिकै रहिरहने छ । त्यो रमाईलो त्यतिकै कायमै रहिरहनेछ ।
१४.आजसम्म लाई हेर्ने हो भने कति प्रतिशत काम सम्पन्न भयो ?
यो मेलाको तयारी आजको दिनसम्म मेलाको सम्पूृर्ण कार्य सम्पन्न भई सकेको छ । यहाँ हामीले सुरक्षा निकायको व्यवस्था मिलाउने,खानेपानीको व्यवस्था मिलाउने, लगायतका सम्पूर्ण कामहरु हामीले सम्पन्न गरी सकेका छौँ ।
१५.अन्त्यमा के भन्न चाहानुहुन्छ ?
अन्त्यमा सम्पूर्ण धादिङबासी र देशबासीहरुमा सबै तहका जनशक्तिहरु, शिक्षक, शिक्षिका निश्चयनै यो गंगाजमुना गाउँपालिकामा धार्मिक स्थलले छुट्टै महत्व बोकेको गाउँपालिका छ । त्यसलाई पर्यटकीय स्थल बनाउनु पर्ने नै छ तपाईहरुले पनि यसलाई सहयोग गर्दिनुस भन्छु । त्यो मेलामा देशका सम्पूर्ण भक्तजनहरु त्यहाँ पाल्नुहुन सबैलाई अनुरोध गर्छु । धन्यवाद !